Substratum Network စျေး - အွန်လိုင်း SUB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Substratum Network (SUB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Substratum Network (SUB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Substratum Network ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 731 107.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Substratum Network တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Substratum Network များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Substratum NetworkSUB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00296Substratum NetworkSUB သို့ ယူရိုEUR€0.00251Substratum NetworkSUB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00226Substratum NetworkSUB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00269Substratum NetworkSUB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0264Substratum NetworkSUB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0187Substratum NetworkSUB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0655Substratum NetworkSUB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.011Substratum NetworkSUB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00392Substratum NetworkSUB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00414Substratum NetworkSUB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0657Substratum NetworkSUB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0229Substratum NetworkSUB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0159Substratum NetworkSUB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.222Substratum NetworkSUB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.5Substratum NetworkSUB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00406Substratum NetworkSUB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00453Substratum NetworkSUB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0922Substratum NetworkSUB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0206Substratum NetworkSUB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.316Substratum NetworkSUB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3.51Substratum NetworkSUB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1.15Substratum NetworkSUB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.217Substratum NetworkSUB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0814
Substratum NetworkSUB သို့ BitcoinBTC0.0000003 Substratum NetworkSUB သို့ EthereumETH0.000008 Substratum NetworkSUB သို့ LitecoinLTC0.00005 Substratum NetworkSUB သို့ DigitalCashDASH0.00003 Substratum NetworkSUB သို့ MoneroXMR0.00003 Substratum NetworkSUB သို့ NxtNXT0.231 Substratum NetworkSUB သို့ Ethereum ClassicETC0.000436 Substratum NetworkSUB သို့ DogecoinDOGE0.854 Substratum NetworkSUB သို့ ZCashZEC0.00004 Substratum NetworkSUB သို့ BitsharesBTS0.0912 Substratum NetworkSUB သို့ DigiByteDGB0.0947 Substratum NetworkSUB သို့ RippleXRP0.0105 Substratum NetworkSUB သို့ BitcoinDarkBTCD0.000102 Substratum NetworkSUB သို့ PeerCoinPPC0.00982 Substratum NetworkSUB သို့ CraigsCoinCRAIG1.35 Substratum NetworkSUB သို့ BitstakeXBS0.126 Substratum NetworkSUB သို့ PayCoinXPY0.0517 Substratum NetworkSUB သို့ ProsperCoinPRC0.372 Substratum NetworkSUB သို့ YbCoinYBC0.000002 Substratum NetworkSUB သို့ DarkKushDANK0.95 Substratum NetworkSUB သို့ GiveCoinGIVE6.41 Substratum NetworkSUB သို့ KoboCoinKOBO0.675 Substratum NetworkSUB သို့ DarkTokenDT0.00273 Substratum NetworkSUB သို့ CETUS CoinCETI8.55